Ogaden News Agency (ONA) – Gudiga Doorashada Kenya oo Ka Warbixiyay Xaalada Doorashada.
Gudiga Doorashada Kenya oo Ka Warbixiyay Xaalada Doorashada.
Madaxa guddida doorashooyinka Kenya, Wafula Chebukati, ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay halka ay marayso tirinta codadkii laga dhiibtay doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ahayd.
Gudoomiyaha iyo saraakiil kale oo ka tirsan gudida oo saxaafada kula hadlay xarunta guud ee tirinta codadka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababaha ay u cuskadeen in ay hakiyaan doorashadii laga qaban lahaa afar gobol oo galbeedka dalka ku yaala, kuwaas oo marka hore ay qorsheeyeen in ay shalay Sabtidii ka dhacdo doorashadu.
Mr. Chebukati ayaa sheegay in sababahaas ay ka mid yihiin in shaqaalahii doorashadu aanay gaadhin goobahaas wakhtigii loogu talo galay. Wuxu sheegay in ay xarunta dhexe soo gaadhay natiijada 260 degmo doorasho oo ka mid ah 290 degmo doorasho ee ay doorashadu ka dhacday, taas oo ka dhigan buu yidhi in 37,161 goob codbixineed oo ka mid ah 40,000 ay natiijadoodii haatan gacanta ku hayaan.
Mar la waydiiyey sida uu ku caddayn karo qiyaasta ay gudidu shaacisay ee ah in tirada dadka codbixinta u soo baxay ay ahayd boqolkiiba 48, gudoomiyuhu wuxu yidhi “marka la eego dadka lagu xajiijiyey qalabka elektarooniga ah ee codka lagu dhiibanayey iyo tirada guud ee diiwaan gashan waxaa noo caddaatay in codbixiyeyaasha diiwaan gashan boqolkiiba 48 ka mid ahi ay codkooda dhiibteen”.